Dukaanka labaad ee Apple ee ku yaal Seoul wuxuu albaabada u furi doonaa berri 26 | Waxaan ka socdaa mac
In kasta oo aan weli dhexda uga jirno masiibo isla markaana ganacsiya badan ay si weyn u saameeyeen dhibaatada jirta, waxaa jira shirkado sii socda oo sii kordhaya. Apple ayaa ka mid ah inkasta oo ay run tahay in dhibaatadu ku dhacday, haddana si la mid ah uma ay samayn. Xaqiiqdii, way sii waday inay kororto oo ay gaarto nambarada rikoorka. Waxyaabaha ayaa sifiican u socda in halkii laga fikiri lahaa in la gooyo, ganacsigu wuu sii ballaaranayaa. Berrito Apple Store cusub ayaa laga furay adduunka. Gaar ahaan Seoul. Tan markii horeba waa tii labaad ee magaalada.
Caasimadda Kuuriyada Koonfureed Seoul, oo ay ku nool yihiin ku dhowaad 10 milyan, waxay yeelan doontaa Apple Store labaad. Wuxuu albaabada u furi doonaa berri 26ka Febraayo. Ka dib furitaankiisa ayaa lagu dhawaaqay bishii November ee la soo dhaafay iyada oo loo marayo bogga Apple. Bakhaarka Waxay ku taal L1 ee IFC Mall Seoul, Yeidoido. Furitaankan cusub ayaa yimid kadib markii kiisaska Coronavirus ay ku dhaceen magaalada, ka dib markii ay aad u sarreeyeen bilihii la soo dhaafay.
Caqli ahaan ma jiri doono xaflad furitaan sidii horey loogu qaban jiray ka hor faafitaanka adduunka. Waxay noqon doontaa furfurnaan xoog leh iyo Apple Store waa inay buuxiyaan shuruudaha amniga ee loo dejiyay dhammaan dukaamada shirkadda. Dhiirigelinta dukaamaysiga khadka tooska ah iyo uruurinta deg degga ah. Awoodda oo yaraatay. Ballanta hore ee dayactirka ama adeegyada la-talinta. Masaafada bulshada, isticmaalka jel hydroalcoholic-ka iyo waajibaadka xirashada maaskaro marwalba.
Hal dukaan oo kale in lagu daro liiska Apple Stores ee Apple ku faafay adduunka oo dhan. Hal dukaan oo kale oo aad ka iibsan karto astaamaha astaamaha iyo qalabyada leh tayada ugu sareysa ee adeegga macaamiisha. Waxaan si taxaddar leh u dhegeysan doonnaa sawirrada lagu soo rogay Shabakadda Dukaankan cusub ee Apple Yeidoido.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Dukaanka labaad ee Apple ee Seoul wuxuu albaabada u furi doonaa berri maalinta 26
Naqshadaynta iMac iyo "Mac Pro mini" oo uu saadaaliyay Jon Prosser inbadan oo naga mid ahna jecel